Zokiolona eny Ivato : hisokatra ny fakana fisotroan-dronono | NewsMada
Zokiolona eny Ivato : hisokatra ny fakana fisotroan-dronono
Nivaly ny hetahetan’ireo zokiolona eto amin’ny kaominina Ivato. Hozaraina ety an-toerana amin’izay ny fisotroan-drononon’izy ireo manomboka ny volana janoary 2019. Efa ela no nangatahin’ireo zokiolona analiny ny handraisana ny fisotroan-drononony ho eto amin’ny kaominina saingy tsy nohenoin’ireo mpitondra teo aloha izany.
Vaindohan-draharahan’ny ben’ny tanàna Randrianarisoa Penjy kosa anefa io fangatahan’ny zokiolona io ka niady mafy ny tenany hanokafana toerana fandraisana fisotroan-dronono eto Ivato. Namaly ny antso ny fitondram-panjakana foibe ka izao tanteraka izao ny fanirian’ireo ray aman-dreny analiny efa misotro ronono ireo.
Marihina fa eny Ambohidratrimo ireo zokiolona ireo no maka ny fisotroan-drononony amin’izao fotoana izao. Miainga amin’ny 4 ora maraina mandeha milahatra sy misisika amin’ny taxi-be.
Milahatra ora maro mihitsy vao azo ilay vola. Ny sasany, safotra eo am-pilaharana noho ny harerahana sy ny hafanana ary ny hanoanana indraindray. Avy eo mbola tratry ny mpangarom-paosy indray ilay vola kely nisasarana nandritra ny tontolo andro teo.
“Andraiitro ny mitsimbina ny sokajin’olona rehetra eto an-tanàna amin’ny maha-ben’ny tanàna ahy. Mampalahelo ny mijery ireo raiamandreny efa voky taona mitanina andro sy reraky ny filaharana rehefa maka fisotroan-dronono. Mendrika ireo raiamandreny ireo ny hanokanana toerana sahaza azy sy manakaiky azy hanaovana ny fakana ny fisotroan-drononony”, hoy ny ben’ny tanàna, Randrianarisoa Penjy.